Pregnancy Bell Bands – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Pregnancy Bell Bands
ကိုယျဝနျရှိခြိနျ ဗိုကျစညျး စညျးရငျ ဘယျလို အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရသလဲ?
၁။ လှုပျရှားသှားလာတဲ့အခါ ကလေးကို ထိခိုကျမှု နညျးပါတယျ
၂။ ဗိုကျအရပွေားပျေါ ကရြောကျတဲ့ တငျးအားနညျးသှားတာကွောငျ့ ဗိုကျကွောပွတျတာ သကျသာစပေါတယျ
၁။ နံပါတျ ၁ အမြိုးအစားကတော့ ခါးနောကျကလြှိုပွိး ဗိုကျဗိုကျလေး အောကျက ပငျ့ပတျရတဲ့ အမြိုးအစားပါ။ သူက အကြီအောကျမှာ သိသာနတေယျ ဆိုပမေယျ့ သူက ဗိုကျရဲ့ အလေးခြိနျကို မြှပေးတဲ့နရောမှာ ပထမတနျးစားပါပဲ။
၂။ နံပါတျ၂ အမြိုးအစားကတော့ စှပျပွီး ဗိုကျကို ပငျ့တဲ့ အမြိုးအစားပါ။ ဝတျရလှယျတာပေါ့။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရတာကို မရပျခငျြတဲ့ မိခငျလောငျးတှဆေို ဒီအမြိုးအစားလေး သုံးသငျ့ပါတယျ။
၃။ နံပါတျ ၃ အမြိုးအစားကတော့ အမြိုးသမိး စှပျကယျြလို ဝတျဆငျရတဲ့ အမြိုးအစားဖွဈပွီး ပေါ့ပါးစှာဝတျဆငျနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျလနုစဉျ ဗိုကျကလေး မပှနျးအောငျသုံးဖို့ အသငျ့တျောဆုံးပါ။
ဘယျအမြိုးအစား ကိုယျဝနျဆောငျ ဗိုကျစညျး ဖွဈပါစေ ရညျရှယျခကျြကတေ့ာ တဈခုတညျးပါ။ ကိုယျဝနျကွောငျ့ ခါးနာခွငျးကို ကာကှယျဖို့ပေါ့။ တဈခုတော့ သတိထားရပါမယျ။ ဗိုကျနာတာ ခါးနာတာဟာ မီးဖှားကာနီး အခွအေနေ ဖွဈနနေိုငျတာမို့ လရငျ့နရေငျတော့ ခါးနာရငျ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
ကိုယ်ဝန်ရှိချိန် ဗိုက်စည်း စည်းရင် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရသလဲ?
၁။ လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါ ကလေးကို ထိခိုက်မှု နည်းပါတယ်
၂။ ဗိုက်အရေပြားပေါ် ကျရောက်တဲ့ တင်းအားနည်းသွားတာကြောင့် ဗိုက်ကြောပြတ်တာ သက်သာစေပါတယ်
၁။ နံပါတ် ၁ အမျိုးအစားကတော့ ခါးနောက်ကလျှိုပြိး ဗိုက်ဗိုက်လေး အောက်က ပင့်ပတ်ရတဲ့ အမျိုးအစားပါ။ သူက အကျီအောက်မှာ သိသာနေတယ် ဆိုပေမယ့် သူက ဗိုက်ရဲ့ အလေးချိန်ကို မျှပေးတဲ့နေရာမှာ ပထမတန်းစားပါပဲ။
၂။ နံပါတ်၂ အမျိုးအစားကတော့ စွပ်ပြီး ဗိုက်ကို ပင့်တဲ့ အမျိုးအစားပါ။ ဝတ်ရလွယ်တာပေါ့။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာကို မရပ်ချင်တဲ့ မိခင်လောင်းတွေဆို ဒီအမျိုးအစားလေး သုံးသင့်ပါတယ်။
၃။ နံပါတ် ၃ အမျိုးအစားကတော့ အမျိုးသမိး စွပ်ကျယ်လို ဝတ်ဆင်ရတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ပေါ့ပါးစွာဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်လနုစဉ် ဗိုက်ကလေး မပွန်းအောင်သုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါ။
ဘယ်အမျိုးအစား ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဗိုက်စည်း ဖြစ်ပါစေ ရည်ရွယ်ချက်ကတေ့ာ တစ်ခုတည်းပါ။ ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ခါးနာခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ပေါ့။ တစ်ခုတော့ သတိထားရပါမယ်။ ဗိုက်နာတာ ခါးနာတာဟာ မီးဖွားကာနီး အခြေအနေ ဖြစ်နေနိုင်တာမို့ လရင့်နေရင်တော့ ခါးနာရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။